2013-06-23 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Photo and Media Editor Tools - ON Saturday, June 29, 2013 No comments
IN Security Tools - ON Saturday, June 29, 2013 No comments
ဒါလေးကတော့ Password Recover Software လေးပါ Browsers တွေနဲ့ Messenger တော်တော် များများကို Support လုပ်ပါတယ်လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကိုအောက်မှာဖော် ပြပေးလိုက်ပါတယ်အခု
Nsasoft Nsasoft SpotAuditor 4.6.5 software fromacompany that is capable of many passwords stored inaWindows environment, you must uncovered. This software is able to reveal passwords stored passwords of Internet Explorer, such as Email, Password and reveal password online chat software like ICQ and MSN, passwords to FTP, passwords stored in the Outlook application and passwords of all Windows Dialup Connection it is capable of. Using the system will be able to manage the Protected Storage passwords stored in that area that are available to delete. In addition to other ancillary facilities, such as facilities management, all address password reopen viewed, saved addresses and software installed on your computer or other computer in the Start menu Run
Network will have a
Features Nsasoft SpotAuditor:
Browser Internet Explorer passwords recovery
Fayrfks retrieve passwords stored in Mozilla browsers, Opera and ...
Ability to recover passwords MSN messenger and Windows Live Messenger
Ability to recover passwords for different online accounts like Dial Up, VPN and ...
Outlook Express and Microsoft Office Outlook passwords recovery capabilities
Ability to recover passwords software like ICQ, Trillian, Miranda IM, Google Talk, Google Desktop, and ...
Ability to recover passwords Far Ftp Client, FileZilla, WS_FTP, SmartFTP, FlashFXP Ftp Client and ...
Ability to recover passwords WebDrive ftp, FTP Control, FTP Navigator, 32bit FTP, CoffeeCup Direct FTP and ...
Ability to clear Internet Explorer History, Cookies and Internet temporary files
The ability to display all passwords circle and star
Retrieve passwords despite having very high strength with low volumes
Download Nsasoft SpotAudito, program Nsasoft SpotAudito, Software Nsasoft SpotAudito, serial
IN Internet Download Manager, Software - ON Saturday, June 29, 2013 No comments
Internet Download Manager ရဲ့ Speed ကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် IDM Optimizer ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ သိပ်ကို နှေးကွေးလွန်းတဲ့ Internet Speed ကိုသုံးပြီး လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကို Download ချကြတဲ့အခါ IDM ကို သုံးကြပါတယ် IDM Optimizer က အဲဒီ IDM ကိုမှ ထပ်ပြီးSpeed မြှင့်ပေးပါတယ်
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတွေရဲ့ IP အလိုက်ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေပြီး နှေးတာ မြန်တာကတော့ အဲဒီ IP တွေနဲ့သာ ဆိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်အသုံးပြုတာကတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး IDM ကို Install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်
ဒီ IDM Optimizer ကို Install လုပ်ပြီးရင် Maximize Now ! ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲTaskbar ရဲ့ညာဘက် Tray ထဲက IDM Icon ကို Right Click ထောက်ပြီး exit လုပ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်IDM Optimizer ကActive
ဖြစ်နေပါပြီ IDM Optimizer ကို အလုပ်မလုပ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Restore Default ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ
IDM Optimizer isavery useful little tool for maximizing the performance of Internet Download Manager (IDM). By using IDM Optimizer you will get the maximum speed indownloading the file son the internet.
IN Internet Tools - ON Friday, June 28, 2013 No comments
CCleaner Business Edition & Professional Edition v4.03.4151 full with activator
IN Speed Up Browser, Speed Up Internet, Speed up window, System Cleaner - ON Friday, June 28, 2013 No comments
CCleaner ဆိုတာတော့ PC သုံးသူတိုင်းနီးပါး ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ကွန်ပျူတာထဲက မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးပြီး OS ကို သွက်လက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့System Software လေးပါပဲ
နာက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းလေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Version3.28 နောက်ပိုင်းကစလို့
မြန်မာ ဘာသာနဲ့ Windows 8 မှာအသုံးပြုလာနိုင်တာကလည်း ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းသိတွေမို့ အထွေအထူးပြောစရာမလိုတာကြောင့် LatestVersion လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းသွား
Download>>> solidfiles (or) dropbox (or) uppit
IN Security Tools - ON Friday, June 28, 2013 No comments
လေးဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ..
Features Password Depot:
Environment-friendly and easy to manage passwords and access them
Capability gaps passwords useless
Maximum possible protection of sensitive data
Ability keyloggers and spyware protection campaigns
Enter the user name and password on websites automatically
Compatibility with LAN
Password lists on FTP servers for worldwide access storage for your data
Supports USB flash drives to transfer password
Individual fields can be added to the database
You can fill in the password field and write web Sfkhat
Ability to protect Clipboard
And the ability to import passwords from / to other password managers of
Username and password to copy or URL to clipboard or drag and drop to specific fields
Ability to detect and correct passwords
Local security could complete
Clean all external fields
Download Password Depot, programs, Password Depot, serial Password Depot, Crack Password Depot, Pass Software
Internet Download Manager 6.17 Build 1 Full Version
IN Internet Download Manager - ON Friday, June 28, 2013 No comments
သစ်ကြိုက်သူများအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ IDM ဆိုရင် Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို patch file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
Download >>> Dropbox (or) solidfiles (or) uppit
IDM (Internet Download Manager) kembali merilis versi terbarunya, yaitu Internet Download Manager 6.17 yang telah di release pada 27 June 2013. Apa saja yang ada dalam fitur terbaru ini kita simak dibawah ini.
IN Video Editing - ON Thursday, June 27, 2013 No comments
ဒါကတော့ Video Editing သမားတွေအကြိုက်တွေ့ရတဲ့ နာမည်ကြီး Software
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Video ကြည့်နေရင်း စိတ်ကြိုက် Editing လုပ်နိုင်သလို User Friendly
ဖြစ်တဲ့အပြင်အဆင်နဲ့ Editing Tools တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
Download >>> Trial
Download Keygen>>> Dropbox (or) solidfiles (or) uppit
IN USB - ON Thursday, June 27, 2013 No comments
Get Universal Keygen Generator-2013 with Full Version
IN Utilities - ON Wednesday, June 26, 2013 No comments
ဆော်ဝဲ တွေ ဂိမ်းတွေ ကို full version ဖြစ်အောင် serial တွေ ကီးတွေ ကို ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ university keygen generator 2013 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် very popular
keygen လေးပါလိုအပ်သူများ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်
လိုချင်တဲ့ ဆော်ဝဲ နာမည် ဂိမ်းနာမည် ရိုက်ပြီး ရှာ လို့ ရပါတယ် လိုချင်တယ်ဆော့ဝဲ တွေပြီ ဆို ရွေုးပြီး
GENERATE ကို နှိပ်လိုက်ရင် အပေါ်တန်းမှာ key တွေ ထွက်လာမှာပါ ထွက်လာ key ကို copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ယုံဘဲ အလန်းစားလေးပါ၊
key တွေ ထည့် ပြီဆိုရင်တော့ offline နဲ့ ထည့် တာ အကောင်းဆုံးဘဲနော်
Universal Keygen 2013 isavery popular key generator. You can use this software to activate your software by entering key, or you can generate your activation and serial key by using this software. Just Download and Run This Software and Search Your Serial.
Download Here>>>> Link 1 / Link2/ Link3/ Link 4
IN Converter - ON Wednesday, June 26, 2013 No comments
IN Optimizer - ON Wednesday, June 26, 2013 No comments
သူ့ကိုတော့အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါလေးမိမိတို့စက်ကိုသွက်လက်မြန်ဆန်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ Optimizer Software ကောင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Version အသစ်မှာ ပိုမိုလှပတဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်နဲ့ အသုံးဝင် Tools အချို့ ပါဝင်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
IN Security Tools - ON Wednesday, June 26, 2013 No comments
Download>>>AFileZ (or) solidfiles (or) dropbox
IN Speed up window, Windows7- ON Tuesday, June 25, 2013 No comments
ဒီကောင်လေးမှာ Features တွေအတော်များများ ပါပါတယ်..။ Windows7Manager ဆိုတဲ့အတိုင်း Windows7 နဲ့ ပါတ်သက်တာတွေ အားလုံးနီပါး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စက်ကိုအမှိုက်တွေရှင်းပေးတာ၊
မလိုအပ်တဲ့ Registry Error တွေကို Cleaning လုပ်ပေးတာတွေ၊ Junk ဖိုင်တွေနဲ့ တခြားအသုံးဝင်တဲ့ စက်ကို မြန်အောင်၊သွက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ အများကြီး ပါပါတယ်လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ..
Download>>> solidfiles (or) dropbox (or) uppit (or) ge.tt
IN Photo and Media Editor Tools - ON Tuesday, June 25, 2013 No comments
မိမိတို့ Photo တွေကို နှစ်သက်ရာသံစဉ်တွေနဲ့ DVD Slideshow ပြုလုပ်ချင်သူတွေ
အတွက်တော့ တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်လေးပါ။ File Size သေးငယ်သလောက်
အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပြည့်စုံတာကြောင့်လည်း ဝါသနာပါသူတွေအတွက် ထူးထူးခြား
ခြား တတ်သိနေစရာမလိုပဲ စိတ်ကြိုက် Slideshow ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်ကြမှာပါ။
Slideshow ကောင်းကောင်းလိုချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ကြပါ.
Download>>> solidfiles (or) dropbox (or) ge.tt
Touch up photos/videos with crop, rotate tools and special effects like Old Picture, Wood, and Inverse...
HD Experience: Output slideshow in HD formats to enjoy high quality videos. For the SD videos, all regular formats like MP4, AVI, MOV are supported.
On Devices: Any popular mobile devices are supported, such as iPad, iPhone, iPod, Xbox, PSP, BlackBerry, and Mobile Phone...
Home page : http://www.wondershare.com/pro/dvd-slideshow-builder-deluxe.html
IN Downloader, Software - ON Monday, June 24, 2013 No comments
HiDownload Platinum ဟာ Movie Video ဖိုင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Youtube နဲ့ Facebook တွေမှာ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်ဆုံးနဲ့အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဒေါင်း
ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခု 8.14 Full Version ရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
DVD Slideshow Builder Deluxe 6.1.13 full with crac...
Active File Recovery Professional 11.0.5 With Lice...